TIANSE Global gị n'ụlọnga chọrọ
Dị ka otu onye nke ụwa ọkachamara Nsukka nke na-ebi akwụkwọ consumables na ụlọ ọrụ na-enye , anyị na-akwa mpako na-enye ihe kasị emelitere, mkpa ụlọ ọrụ na ngwaahịa na ọrụ. Office mkpa buru ibu ma na anyị na-agba mbọ iji nzute, ha nile. N'ihi ya, anyị na-mgbe na-achọ maka azụmahịa collaborations na mmadụ n'ụwa nile. Anyị ji obi anyị na-agba gị na-otu nke anyị so na TIANSE Family. Ka anyị na-arụ ọrụ ọnụ iji mma ọrụ ahịa anyị na iji nweta ukwuu ọbụna ịga nke ọma!
Rich Industry Ahụmahụ
Na ihe karịrị afọ 10 'ahụmahụ na ụlọ ọrụ, anyị na-elekwasị anya na ihe anyị na-eme na enwela widest nso nke ibi akwụkwọ consumables na ụlọ ọrụ na-enye dị iche iche na usoro na ụzọ.
Na na nlezianya QC usoro na rigorous na-ụlọ ule, anyị na-eme kwesiri onwe ha nkwa iji hụ ahịa anyị na-enweta ndị kasị mma na ngwaahịa na kasị ala-ekwe omume ahịa.
Fast na n'oge nzipu
Na a mmepụta isi ekpuchi 35,000 square mita Huizhou na 5 nnukwu n'ụlọ nkwakọba na ngụkọta nkwakọba ohere ruo 10,000 square mita na China, nnyefe nwere ike na-ekwe nkwa n'ime 48 awa na isi Chinese obodo.
All-gburugburu ahịa Ọrụ
Na a ọkachamara ahịa ọrụ otu egwuregwu, 193 ọkachamara ahịa ọrụ ebe a na 2,300 ekwenye outlets mba, anyị na-enye ihe niile na-gburugburu na ahaziri ọrụ anyị niile ahịa niile.
Tụkwasịrị Obi TIANSE Brand Uru
TIANSE ika ngwaahịa na-akwa mfọn ma anụ ụlọ na esenidụt ahịa, na-ere nnọọ nke ọma na isi e-azụmahịa nyiwe ka Tmall.com, JD.com na Amazon, wdg Ugbu a, TIANSE nwere ihe karịrị 80 ika mmadụ n'ụwa nile.
Ibu ụzọ Free Sample Support
Nkwado Brand Onyinye Support
Regional Ahịa Resource Support
Full Brand Ịdị Support
Professional Ukwu nwoke na-ere Support
Professional ụzụ & Mgbe-sales Support
Full ude nke TIANSE ụlọọrụ omenala, azụmahịa nkà ihe ọmụma na atụmatụ mmepe; Strong njikere imekota na TIANSE mee azụmahịa a ịga nke ọma.
A aha ụlọ ọrụ na mpaghara ebe na ụfọdụ azụmahịa na-eme na nzere.
Dịtụ mụ ahịa ego ma na-adigide mmepe nke azụmahịa.
Strong ahịa ọrụ ike na obodo na mpaghara na-ezi azụmahịa aha.
Jikọọ TIANSE Now!
Anyị ji obi anyị na-agba gị na-otu nke anyị so na TIANSE Family. TIANSE gị ga-abụ ihe kasị mma na onye òtù ọlụlụ. Ka anyị lụọ ọgụ maka ukwuu azụmahịa ihe ịga nke ọma na-amị mkpụrụ mmeri-mmeri na ya pụta.